मनोरञ्जन Archives - Page 37 of 38 - inaruwaonline.com
बफ सुकुटी भनेपछि हुरुक्क माला
अहिलेकी चर्चित मोडल हुन् माला लिम्बु । फिचर चलचित्र ‘वान वे’वाट अभिनयमा प्रवेश गरेकी मालाले तीन दर्जन बढी भिडियोमा अभिनय गरेकी छिन् । उनको फिगरको निकै चर्चा हुने गर्छ । बिहान र बेलुका के खानु हुन्छ ? त्यस्तो फिक्स रुटिङ छैन । कहिले चिया र ब्रेड हुन्छ त कहिले स्याण्डवीच खान्छु । दाल भात पनि हुन्छ । खाना भनेको आफ्नो मुड अनुसार हुन्छ । मिठो लाग्ने खानेकुरा ? सिंगापुरमा हुँदा मलाई मम निकै ...
४२ बर्षमा ऐश्वर्या, जान्नुहोस् उनका १० रहस्य
बलिउड नायिका ऐश्वर्या राय बच्चन ४२ वर्ष लागेकी छिन् । १ नोभेम्बर सन् १९७३ मा जन्मिएकी ऐश्वर्याले मोडलिङवाट करिअर सुरु गरेकी थिईन् । उनका बुबा कृष्णराज मरिन बायोलोजिस्ट हुन् भने आमा बृन्दा र भाई आदित्य राय छन् । पछिल्लो समय ‘जज्बा’ मा अभिनय गरेकी ऐश्वर्याले सन् १९९४ मा ‘मिस वल्ड’को उपाधी जितेकी थिईन् । उनले ‘हम दिल दे चुके सनम, ताल, धुम-२, देबदास, रोबोट, गुरु’ लगायतका चलचित्रमा अभिनय गरेकी छिन् ...
उपेद्र यादबज्यूलाइ मेरो चिठ्ठि............. आदरणिय उपेन्द्र यादवजी तपाइले भन्नु भएछ हामिलाइ ८ जिल्लाको लगौटी होइन २२ जिल्लाको घोती चाहियो........ हुनत तपाइ म भन्दा धेरै बौद्धिक मान्छे म सामान्य कलाकार मात्रै हूँ , तर तपाइको भनाइमा तपाइ कॉहा चुक्नु भो भने २२ जिल्लाको धोति मात्रै होइन ७५ जिल्लाको सिरक नै तपाइकै होइन र? केहि अबुझ हरूलाइ छोडने हो भने अहिले पहाडमा मधेसीलाइ सम्मानै गरिन्छ, तपाइ प...
गितार बजाएर नेपाली युवाले गरे विश्‍व रेकर्ड (भिडियाे सहित)
काठमाडौं: नेपाली युवा निर्वाण विष्टले छिटो गितार बजाएर विश्वरेकर्ड कायम गरेका छन्। अहिले उनी त्यहाँ अध्ययनसँगै ‘डे ब्रेक’ नामक ब्यान्ड स्थापना गरेर संगीतमा क्रियाशील छन्। ब्यान्डमा उनी लिड गिटारिस्ट छन्।उनले १६ सय बिट्स प्रतिमिनेट गितार बजाएर रेकर्ड कायम गरेका हुन्। यसअघि अमेरिकाका डानियल हेम्बुचले १३ सय बिट्स प्रतिमिनेट बजाएर कायम गरेको विश्व रेकर्ड १६ वर्षीय निर्वाणले तोडेका हुन्। भारतको म...
सलमान खानले गुपचुप इन्गेजमेन्ट गरेको दाबी
मुम्बाई – बलिवुड सुपरस्टार सलमान खानको विवाहको विषय पुनः चर्चामा आएको छ । तर, यो खबर भारतबाट नभएर रोमानियाबाट फैलिएको हो । मिडिया रिपोर्टका अनुसार रोमानियाको बुखारेस्टमा गुपचुप रुपमा लुलिया वन्तुरले सलमानसँग इन्गेजमेन्ट गरेको र आगामी वर्षसम्म विवाह गर्ने दाबी गरिएको छ । लुलिया करिब ५ हप्ताअघि बुखारेस्ट पुगेकी थिइन् । मिडिया रिपोर्टका अनुसार त्यही सलमान र लुलियाले गुपचुपरुपमा इन्गेजमेन्ट गरेका ...
सोमबार, कार्तिक ०२, २०७२
छोराको क्यान्सरको बारेमा किताब लेख्दै इमरान हास्मी
मुम्बाई – बलिवुड अभिनेता इमरान हास्मी अब लेखक बन्ने भएका छन् । हास्मीले आफ्नो पाँच वर्षीय छोराको क्यान्सर रोगसँगको संघर्षको बारेमा पुस्तक लेख्न लागेका हुन् । ३६ वर्षीय अभिनेताले ट्वीटरमा यस विषयबारे पोष्ट गर्दै आफू निकै उत्साहित रहेको बताएका छन् । ‘पछिल्लो २ वर्ष मेरोको जीवनको संघर्षपूर्ण अवधि रह्यो । उक्त अवधिमा मैले दुईवटा शिक्षक पाए – क्यान्सर र मेरो छोरा । म पेन्गुइन बुक्सका सम्पूर्ण टिमला...
नेपालीहरुको महान चाडहरु नजिकिदै गएको बेला गायक गायिकाहरुले दशै तिहारलाई लक्षित गरी गितहरु सार्वजनीक गर्ने क्रम बढोको छ । अघिल्लो वर्षमा पनि चाढपर्वलाई लक्षित गर्दै थुप्रै गितहरु सार्वजनीक गरीएको थियो भने कमै मात्रामा बजार पिटन सफल भएका थिए । यसै सन्दर्भमा गायक डेबिड संकरले यो बर्षको दाश्रो एलबम दशै आयो भन्ने गितको भिडियो सार्वजनीक गर्ने तयारीमा जुटेका छन । पूर्व लगायत नेपालका बिभिन्न जिल्ला...